पिपुल्स हेल्पफुलको दशौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
सुरेन्द्र सिंह फाल्गुन ६, २०७४
जनकपुरधाम । पिपुल्स हेलपफुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. जनकपुरको दशौं वार्षिक साधारणसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले संचालक समिति, लेखा समिति र ऋण समिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो । राजेन्द्र प्रसाद किरणको अध्यक्षतामा चयन गरिएको संचालक समितिको उपाध्यक्षमा स्वयम्बरनाथ झा रहेका छन् । यस्तै सदस्यहरुमा मो. हारिस, रंजित झा, संगिता देवी साह, गंगा साह र विमला देवी मण्डल रहेका छन् । युगल किशोर मण्डलको संयोकत्वमा चयन गरिएको लेखा समितिको सदस्यमा गीता श्रेष्ठ र मो. अब्दुल मलिक रहेका छन् । यस्तै ऋण उपसमितिमा अञ्जु मिश्रा र अरुण झा चयन भएका छन् । यसअघि जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष धु्रव नारायण यादवको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उद्घाटन सत्रमा पिपुल्स हेल्पफुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद किरणले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को आर्थिक कारोबार र आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अनुमानित कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।